KnotDNS 3.0.0, yakavhurika sosi DNS server iyo inopa yakakosha DNS mabasa | Linux Vakapindwa muropa
Knot DNS 3.0.0 kuburitswa kwaburitswa, ane chiremera DNS server kuita kwepamusoro (iyo inodzokorora inogadzirwa seyakasiyana application) iyo inotsigira ese emazuva ano maDNS maficha.
Knot DNS ine chiremera server vhura sosi dura zita rehurongwa. Yakagadzirwa kubva pakutanga uye iri kushandirwa neCZ.NIC. Chinangwa cheichi chirongwa ndechekupa imwe nzira yakavhurika sosi yekumisikidza yeanobvumirwa mvumo yeDNS server kune vanoshanda veTLD kuwedzera chengetedzo, kugadzikana, uye kusimba kweiyo Domain Name System.
Inoitwa sedhimoni yakamisikidzwa yakawanda, ichishandisa nzira dzinoverengeka dzehurongwa uye zvivakwa zvemadhata kuita sevha nekukurumidza.
1 Nezve Knot DNS
2 KnotDNS main nhau
2.1 Dhawunirodha uye isa
Nezve Knot DNS
Knot DNS inoshandisa zone analyzer yakanyorwa muRagel kuti iwane kukurumidza kwazvo mutoro yenzvimbo pakutanga. Iyo zvakare inokwanisa kuwedzera uye kubvisa nzvimbo munzvimbo inobhururuka nekushandura iyo yekumisikidza faira uye kurodha zvakare sevha uchishandisa iyo 'knotc' chinhu
Knot DNS inotarisa kune yakakwira -kuita query kugadzirisa, iyo yainoshandisa kuwanda kuverenga uye kazhinji kusingavharidzi kuitisa iyo inokodzera zvakanaka kune SMP masisitimu.
Zvimiro senge kuwedzera uye kubvisa nzvimbo munzvimbo inobhururuka zvinopihwa, zone transfer pakati pemaseva, DDNS (zvine simba kugadzirisa), NSID yekuwedzera (RFC 5001), EDNS0 uye DNSSEC (inosanganisira NSEC3), chiyero chekupindura chiyero (RRL).
KnotDNS main nhau
Mune iyi vhezheni itsva yakawedzera yakakwira performance network modhi, yakaitwa uchishandisa iyo XDP (eXpress Data Path) subsystem, iyo inopa nzira yekugadzirisa mapaketi padanho rekutyaira nhanho isati yagadziriswa neLinux kernel network stack. Iyi modhi inoda Linux kernel 4.18 kana gare gare.
Yakawedzerwa Tsigiro ye "Catalog Zones" kurerutsa kugadziriswa kwechipiri DNS maseva. Kana chimiro ichi chabvumidzwa, pachinzvimbo chekutsanangudza marekodhi akapatsanurwa enzvimbo yega yega yechipiri pane yechipiri server, katarogu yezoni inoendeswa pakati pemaseva ekutanga uye echipiri, mushure mezvo nzvimbo dzakagadzirwa padura rekutanga dzinoiswa mucherechedzo senge dzakanyorwa mukatalog yacho yakagadzirwa otomatiki pane yechipiri server pasina chikonzero chekugadzirisa mafaira. Kugadzika. Iyo kcatalogprint yekushandisa inopihwa kubata iyo katarogu.
Yakawedzerwa tsigiro yemamiriro ekudzoserwa kweKSK (kiyi yekusaina kiyi) (RFC 5011) muDNSSEC manyore kiyi manejimendi maitiro.
Yakawedzerwa tsigiro yechizvarwa chakatemwa chemasaini edhijitari uchishandisa ECDSA algorithms (inoda GnuTLS 3.6.10 uye nyowani kuti ishande).
Wakawedzera nyowani yekuongorora yeDNSSEC.
Wakawedzera iyo kzonesign utility yechinyorwa kugadzirwa kwemadhijitari masigineini eDNSSEC.
Wakawedzera kxdpgun utility pamwe nekumisikidza yakakwira performance DNS pane UDP traffic jenareta yeLinux.
Kdig inowedzera DNS pamusoro peHTTPS (DoH) rutsigiro neGnuTLS uye libnghttp2.
Maitiro akachengeteka ekutsigira uye kudzoreredza DNS zone dhata inokurudzirwa.
Iko kuita kweiyo module module kwakagadziriswa zvakanyanya.
Kana multithreaded mode ikagoneswa kugadzira masiginecha edhijitari enzvimbo dzeDNS, mamwe mabasa ekuwedzera ane nzvimbo akaenzana.
Yakagadziridzwa caching kugona uye yakavandudzwa query kuita.
Kuti ugone kuisa iyi DNS server pane yako system iwe unofanirwa kunyora kodhi yako uye nekuda kweizvi unofanirwa kuve nezvinotsamira zvinotevera:
autoconf> = 2.65
Iye zvino iwe unongofanirwa kutora kodhi yeshanduro yazvino. Iwe unogona kuita izvi nekuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye mune yayo yekurodha chikamu iwe unogona kuwana iyo pasuru.
Kana ari matanho ekuitira muunganidzwa, haisi sainzi huru, iwe unofanirwa kuita:
Uye kana iwe uchida kumisikidzwa kwakanyanya, unogona kutarisa izvozvi mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » KnotDNS 3.0.0, yakavhurika sosi DNS server iyo inopa yakakosha mabasa eDNS
Gaia-X yakasarudzika yeruzhinji gore chikuva kubva kuOVHcloud uye T-Maitiro akavakirwa paOverStack